ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးရေကို သိသိသာသာလျှော့ချရန် တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကွေ့ကျိုးပြည်နယ် Sinan ကောင်တီ Tangtou မြို့နယ် Qinggangba ကျေးရွာ၌ ဩဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ကျေးရွာသူ/သားများက လတ်ဆတ်သည့် ပန်းငရုတ်များအား ခူးဆွတ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးရေကို အသင့်အတင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာသောလူ့အဖွဲ့အစည်း ရရှိစေရေး အကူအညီပေးခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းပြန်ကြားရေးရုံး၏ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် စက္ကူဖြူစာတမ်း၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်း၏ ပကတိအောင်မြင်နိုင်သည့်အခြေအနေများအား လက်တွေ့ကျသော အကဲဖြတ်ချက် နှင့် ပြဿနာ၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းများအား လေးနက်စွာနားလည်ခြင်းအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် မဆုတ်မနစ်သော ယုံကြည်မှု နှင့် မတွန့်မဆုတ်သော ဆန္ဒတို့နှင့်အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို တိုက်ဖျက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးရေကို ထုထည်ကြီးမားစွာ လျှော့ချရန် ဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်း“ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆီသို့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မှတ်တမ်းတင်ထိုက်သောခရီး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှင့် တံခါးဖွင့်လှစ်မှု စတင်ခဲ့ချိန်တွင် ကျေးလက်နေ တရုတ်လူမျိုး သန်း ၇၇၀ သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုစံသတ်မှတ်ချက်မျဉ်းအား ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီး ယင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆွဲတင်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအရ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးသည် ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်း၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း ၊ ကုလသမဂ္ဂ ၂၀၃၀ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲထားသည်ထက် ၁၀ နှစ်စော၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပြောင်းလဲခြင်းသည် လူသားတို့၏ သမိုင်းတွင် မကြုံစဖူး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးသည် နောက်ပြန်ဆုတ်ယုတ်ခဲ့ရသည်နှင့်အမျှ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေသည့် အခြားသူများ၏ ယုံကြည်မှု နှင့် ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ (Xinhua)
China helps to dramatically reduce world’s poverty-stricken population: white paper
BEIJING, Sept. 28 (Xinhua) — China has helped to dramatically reduce the world’s poverty-stricken population in achievingamoderately prosperous society, saidawhite paper released Tuesday by China’s State Council Information Office.
Througharealistic assessment of its own prevailing conditions andaprofound understanding of the fundamental causes of the problem, China has fought against poverty with an unswerving faith and dauntless will, leading toamassive reduction in the number of the world’s poor, according to the white paper titled “China’s Epic Journey from Poverty to Prosperity.”
Since the reform and opening up in 1978, 770 million rural Chinese have crossed China’s current poverty line and been lifted out of poverty, said the white paper.
As global poverty reduction has been regressing in recent years, China’s historic success in poverty reduction has boosted the confidence and strength of other peoples who are fighting to eliminate poverty, it said. Enditem
Photo – Villagers harvest fresh peppers at Qinggangba Village, Tangtou Township in Sinan County of southwest China’s Guizhou Province, Aug. 12, 2020. (Xinhua/Yang Wenbin)